Mode - ewa.mg
Buinguira Valérie, tovovavy voafidy ho tsara tarehy indrindra tany amin’ny faritra Analanjirofo. Izy no nambabo ny fon’ny mpitsara tamin’ny fifaninanana Miss Madagascar 2019, notanterahina ny asabotsy teo teny amin’ny Centre de conférences internationales (CCI) Ivato. Araka izany, ity Miss Analanjirofo ity no nosatrohina ny diadema ka hitondra izany mandritra ny herintaona. I Buinguira Valérie no mandimby an’i Miantsa Valisoa, Miss Madagascar 2018 ka haneho ny hatsarana sy ny hakanto ary koa ny fahendrena malagasy amin’ny toerana sy ny sehatra halehany, mandritra ny herintaona. Ny Miss Boeny kosa no voafidy ho “1ère Dauphine” raha ny avy eto Analamanga no “2ème Dauphine”. Izy telo mirahavavy, samy mahafeno ny fepetran’ny atao hoe kanto, na amin’ny endrika na amin’ny bika. Tsiahivina fa nisy karazany efatra ny akanjo nentin’ny mpifaninana nilatro, nandritra ny fifaninanana: ny fitafy nentim-paharazana, ny fitondra eny amoron-dranomasina, ny akanjo fitondra mianjaika ary ny fitafy an-tanàn-dehibe. Ankoatra izany, misy koa ny fepetra eo amin’ny fahaizana amam-pahalalana ary ny fisokafan-tsaina, hitondra ny anjara biriky amin’ny fampandrosoana ny mpiara-belona. Miisa 15 ny tovovavy nifaninana tamin’ity Miss Madagascar 2019 ity. Avy amin’ny faritra 10 miampy ny “Miss diaspora”, voafidy tany Frantsa, izy ireo. Landy R. L’article Miss Madagascar 2019: nasatroka an’i Binguira Valérie ny diadema a été récupéré chez Newsmada.
Fanambadiana : Manomboka mahaliana ny fitafy malagasy
Tato anatin’ny taona vitsy, manomboka mirona amin’ny maha malagasy ny mpifankatia rehefa hiditra amin’ny sehatry ny fanambadiana. Efa ataon’ny olona “theme” mihitsy ny fitafiana malagasy rehefa mariazy, indrindra ny vodiondry sy ny soratra. Na any amin’ny resaka lanonana fotsiny aza dia efa misy manao izany. Antony, efa manomboka mahafantatra ny lamba landy sy ny lanjany ny Malagasy ankehitriny. Fa eo koa, mba te hiavaka sy te hiala amin’ny mahazatra ny olona. Na dia izany aza anefa, matetika ireo malagasy monina any ivelany manao mariazy eto Madagasikara, na any ivelany ihany no tena misafidy izany mba hamoaka ny maha-gasigasy. Tsy amin’ny fitafy ihany fa misongadina koa amin’ny sakafo aroso amin’ny fanambadiana. Eny, hatramin’ny mofomamy izay hifampizarana aza dia aleon’ny mpivady vao sasany manapaka koba. Mahakasika ny fanambadiana izay hatrany, fa eo amin’ny fandaniana kosa indray dia fantatra fa mahalany hatrany amin’ny 35 000 Ariary isaka ny olona asaina ny tolotra manokana na “pack mariage”. Izany hoe, efa ao anatin’io ny rehetra. Fa misy kosa anefa mahalany indroa na intelo eny inefatra avo no lafo indrindra. Manasongadina ny maha-malagasy izay indrindra ny “Mariage en fête”, izay karakarain’ny Tandem ao amin’ny Le Pavé mandritra ny 3 andro, dia ny 30 novambra hatramin’ny rahampitso 2 desambra. Izy io dia hetsika sady tari-dalana mikasika ny mariazy, niainga tamin’ny boky “annuaire mariage” Viavy Tsara. Boky ahitana torohevitra momba ny fanomanana ny mariazy, ny fitaovana ilaina raha hanao fandaminana ara-potoana, ny tetibola, ny olona tokony ho antsoina na tsia amin’ny fanambadiana. Maherin’ny 40 ny trano heva, ka hita ao avokoa ny resaka fitafian’ny mpanambady, fikolokoloana tarehy sy ny bika ary ny volo, ny fanaingoana trano fandraisam-bahiny, ny sakafo, ny divay, ny “carterie”, ny “location”, ny “animation”. Fa ny mampiavaka azy, ny fisian’ny fikambanana mpikabary eto Madagasikara miresaka ny fomba rehetra hanao vodiondry. Manana trano heva ao koa ny kaomina, izay manome torohevitra momba ny fisoratana, ny taratasy ilaina raha hisoratra. Eo amin’ny ara-panahy indray, mandray anjara ao koa ny “league pour la lecture de la bible”. Mpifankatia 5000 eo no handrasana hitsidika ny hetsika, hoy i Noeliarivelo Anja, mpitantana ny Tandem. Laurena Nany L’article Fanambadiana : Manomboka mahaliana ny fitafy malagasy est apparu en premier sur .L’article Fanambadiana : Manomboka mahaliana ny fitafy malagasy a été récupéré chez Triatra.
FITAFY SY SOATOAVINA :: Mitahiry ny kolontsaina malagasy ny lamba landy
Manana ny mampi­avaka azy mane­ran-tany ny lamba landy malagasy. Ankoatra ny endrika ivelany dia mirakitra sy mifamatotra amin’ny kolon­tsaina malagasy ity karazan-damba iray ity. Tsy nisaraka tamin’ny Malagasy ny lamba lany satria velona hitafiana, maty hifonosana. Nakana, ohatra ho an’ny tokantrano vao raha mbola biby ny landy. “Ataovy toy ny tokantranon-dandy, ka ao anatiny manatevina”, hoy ny ohabolana malagasy Noentina nanoharana ireo malai-miasa ihany koa ny landy rehefa mby eo amin’ ny fanenonana ny dingana arahina. “Ikaladala ambodin-tenona, sady tsy hanohy ny tapaka no tsy hanala saritaka”, araka ny fiteny. Kalitao Antoka iray mbola maha­tsara ny lamba landy malagasy ny fanaovana azy amin’ny tanana. Tsy mampiasa milina lehibe mandeha amin’ny herinaratra, toy ny fahita any Shina ny mpanenona, fa mbola fitaovana tsotra haha­fahana manara-maso tsara ny vokatra. Mbola manana karazan-dandy (biby) tsara ihany koa i Madagasikara.“Kely ny famokarana landy eto amintsika, na maro karazana aza”, hoy i Jocelyn, tompon’ andraikitra teknika eo anivon’ ny kaoperativa Rakotomalala & Fils Lambamena. Anisan’ ny antony mahatonga izany ny tsy fananan’ny Malagasy faharetana eo amin’ny fika­rakarana azy ity, izay nomarihina fa maro ny lalana diavina mandra-pahatonga azy ho lamba. Sehatra iray ahitana taratra ny hasiny sy ny kalitaon’ny lamba lany ihany koa ny tontolon’ny lamaody, izay efa mahazo vahana tanteraka eto amintsika. Anisan’ireo mpikirakira sy mpamorona haingo amam-pitafy mampiasa ny lamba landy i Vida sy Maforal, izay mampiranty ny sanganasany etsy amin’ny Alliance Française Andava­mamba (Aft), amin’izao fotoana izao, ao anatin’ilay hetsika “Modus Mode” faharoa. “Akora miavaka, mitahiry ny maha Malagasy ary hahafahana mamoaka aingam-panahy raitra sy kanto ny landy”, hoy izy ireo. Maharitra telopolo taona Akora mahatalanjona. Landy no iantsoana azy ho an’ny velona fa lambamena kosa raha hamonosana ny maty. Ilay ranom-paty amin’ ny fotoana maha lo azy no mamelona ny selan’ny landy ao amin’ny lambamena, ka mahatonga ny fahatezany hatrany amin’ny telopolo taona. Raha vantanina, velona sy miaina ny sela mandrafitra ny landy rehefa izy tonga lambamena. Tsy mampakiana (maina) ny lamba mena ilay fofona sy hamandoana aterak’ilay razana, raha ny fanazan’i Jocelyn, manam-pahaizana momba ny landy. Raha eo amin’ny tsena iraisam-pire­nena, anisan’ny mifaninana amin’ny lamba landy malagasy ny avy any Azia. L’article FITAFY SY SOATOAVINA :: Mitahiry ny kolontsaina malagasy ny lamba landy est apparu en premier sur AoRaha.
“MODUS MODE” ANDIANY FAHAROA :: Nomena vahana ireo sehatra asa manodidina ny lamaody
Manaraka ny fivoaran’ny teknôlôjia vaovao. Sehatra iray tsy very ary tsy afa-misaraka amin’ny tontolon’ny teknôlôjia vaovao ny lamaody. Nisokatra tamin’ny fomba ôfisialy, omaly tolakandro, tetsy amin’ny Alliance Française Andavamamba (AFT) ny hetsika “Modus mode”. Sehatra iray ahitana ny tontolon’ny lamaody sy ireo sehatra asa rehetra miara-dia aminy. Hetsika andiany faharoa, izay hiarahan’ny AFT sy ny TwentyTen Totem, ireo mpamorona lamaody samihafa, ireo trano mpanao taovolo efa sangany eto Mada- gasikara, ireo toerana mpanomana mpilatro, ireo mpaka sary matihanina, ary ireo manana sehatra asa manodidina ny lamaody. Hetsika hanasana ihany koa anefa ireo rehetra mpikirakira sy liana amin’ny tontolon’ ny lamaody. Maro ireo tolotra samihafa hita mandritra ny efatra andro haharetan’ ny hetsika. Ao anatin’ izany ireo fanoroana sy torolalana samihafa manodidina ny famoronana lamaody. Hitondra sy hizara ny traikefany amin’ izany ireo mpamorona samihafa toa an-dry Raleva, Thyrin Mitchell avy any Canada, Tafitia Création, Kala S… Toy izany koa anefa ireo sehatra asa manodidina ny lamaody. Anisan’izany ny fampianarana milatro hiarahana amin’ny Totem, ny fomba fakàna sary lamaody miaraka amin’i Faly… “Ho hita taratra amin’ ity andiany manaraka ity ireo dingana samihafa arahina amin’ny famoronana lamaody, manomboka amin’ny eritreritry ny mpamorona, ka hatramin’ ny fitondran’ny mpilatro azy. Toa izany koa ireo sehatra asa samihafa manodidina ny lamaody”, raha ny fanazavan’i Faly, avy amin’ny TwentyTen Totem. Anisan’ny ivon’ny “Modus Mode” andiany faharoa ny seho an-tsehatra hotanterahina ny zoma 30 novambra, manomboka amin’ny 7 ora hariva. Amin’io takariva io dia hisy ny filatroana hoentina hanehoana ireo vokatry ny asa famoronan’ ireo mpamorona didin’ akanjo, izay horavahan’ ny mozika mifanaraka amin’izany. Mandritra izany, azon’ireo mpijery atao ny maka sary mivantana ny filatroana. L’article “MODUS MODE” ANDIANY FAHAROA :: Nomena vahana ireo sehatra asa manodidina ny lamaody est apparu en premier sur AoRaha.
Miss Madagascar 2019 : Ho fantatra amin’ny sabotsy
Eo am-piandrasana ny vokatry ny fifaninanana Miss Monde, na ny tovovavy tsara bika aman’endrika indrindra maneran-tany, izay atao any Sanya any Chine amin’izao fotoana, efa hiatrika izay hisalotra ny « Miss Madagascar 2019 » kosa ny eto an-tanindrazana. Hotanterahina eny amin’ny CCI Ivato, ary ho fantatra ny sabotsy 1 desambra izao izay hisalotra io anaram-boninahitra io, ary handimby ny toeran’i Miantsa Randriambelonoro, izay miaro ny voninahitr’i Madagasikara any Chine amin’io fihaonana io. Efa eto an-drenivohitra miatrika ny fampivondronana azy, ireo solontena avy amin’ny faritra samihafa eto Madagasikara. Eo am-piandrasana ny andro malaza, dia misy ireo hetsika sy atrik’asa samihafa ataon’ireto tovovavy malagasy tsara bika aman’endrika ireo, ary anisan’ny tao anaty fandaharam-potoanan’izy ireo ny atrikasa notanterahina tany Arivonimamo niaraka tamin’ireo ankizy. Toa ny isan-taona, dia takiana amin’ireto andriambavilanitra ireto ny fanehoana ny maha-izy tsirairay, na eo amin’ny bika aman’endrika, ny fomba fitafy, ny fomba fandeha sy ny fomba fihetsika ary ny fahaizany miteny indrindra indrindra. Hanomboka amin’ny 8 ora alina ny fifaninanana, ary hitsara azy ireo ny avy amin’ny komity mpikarakara. Hampiavaka ity fifidianana Miss Madagascar 2019 ity ny fisian’ny vahiny roa eo amin’io sehatra io, dia ny laharana faha-4 eo amin’ny fifidianana Miss Frantsa 2017, izay nisolo tena ny Nosy La Réunion, Audrey Chan Pao Kan. Toa izany kosa ny Miss Comores 2017, Vanille Emasse. Etsy ankilan’izay any Chine, dia mandray anjara ary miezaka mampiseho sy mampisongadina an’i Madagasikara amin’ireo hetsika samihafa any an-toerana i Miantsa Randriambelonoro. Anisan’ireo hetsika iray nahafahan’i Miantsa naneho ny maha-malagasy azy ny fandraisany anjara tamin’ny hetsika andiany faha-19 ho an’ny Nosy, ho an’ny fizahantany iraisam-pirenena ao Hainan. Miarantsoa L’article Miss Madagascar 2019 : Ho fantatra amin’ny sabotsy est apparu en premier sur .L’article Miss Madagascar 2019 : Ho fantatra amin’ny sabotsy a été récupéré chez Triatra.
c 26 novembre 2018
Fitafy amin’ny andro mafana / fialantsasatra
Ity video ity dia mampiseho karazana akanjo afaka anaovana rehefa mafana. Isaorana be dia be i Michou Beauty
Ny Fila 95 Grant Hill dia mivoaka version lifestyle.
Lamaody mihitsy izao ny manao remix amin’ireo equipementier. Rehefa avy nampanao sonia mandrapahafaty an’i Grant Hill i Fila dia hanararaotra ny fahatsiarovana amin’ny zava-bitan’iny ailier malaza iny. Vaovao indray izany miaraka amin’ny Fila 95, kiraro voalohany nitondra ny sonian’ny Grant Hill. Nomena anarana hoe : « Fila 95 Primo », ny mampiavaka an’azy ity dia ny fampiasana ny cuir manontolo. Eo amin’ilay misy loko mainty, ilay logo dia zara raha hita ary tena mety izany mba ahafahana manisy teboka ny maha lifestyle an’ilay kiraro, izay ampian’ny fisian’ny detils volamena. Ny eo amin’ny fampidirana lacet eo amin’ny cheville dia efa teo amin’ny kiraro fahiny. Amin’ity dia ampiasaina izy ireo. Any Etazonia izy roa ireo, ilay version taloha sy ilay vaovao dia hita amin’ny vidiny 120 dollars.
Mode - Tourisme
Gasy Rug : Mpanamboatra tapis vita amin’ny sisal eto Madagasikara
Ny tapis vitan'i Gasy Rug dia randrana sisal vita amin'ny tanana avokoa ary avy eo dia zairina miaraka amin'ny Raphia. Ireo randrana ireo dia lokoina sy zairina miaraka ao amin-dry zareo ihany. Ny Sisal (Agave Sisalana) dia zava-maniry avy any Mexika, izay misy eran'izao tontolo izao. Ny voly sisal voalohany dia nampidirana teto Madagasika tao aorinan'ny ady lehibe voalohany. Gasy Rug dia miasa miaraka amin'ny "SIFOR" amin'ny famatsiana ny Sisal ho azy. Ny SIFOR dia any Taolagnaro (Fort Dauphin) no misy azy any atsimon'i Madagasikara. Ny "SIFOR" dia orinasa mamokatra Sisal hatramin'ny nampidirana azy teto Madagasikara ary afaka mamokatra sy mamatsy Sisal amin'ny kalitao tena tsara indrindra izay antsoina hoe "GRADE 3L" Izy io dia vokatra azo avaozina foana. Mandritra ny androm-piainany dia mitroka "Dioxyde de carbone" betsaka izy noho ny amoahany. Izy dia "biodégradable". Ny tady synthétiques dia tsy manana an'ireo fepetra ireo. Raha ny fampiasa ny Sisal hatramin'izay toy ny tady sy ny tady kely, dia ny sisal dia natoraly zato isan-jato ary mafy tsara. Noho izany rehetra izany dia ny sisal izany dia mety tsara amin'ny fanamboarana tapis. Ny teknika ampiasaina hanamboarana tapis ao amin'i Gasy Rug dia nolovaina tany amin'ny razana teto Madagasikara, satria dia efa nahitana tapis tao amin'ny rovan'i Manjakamiadana tamin'ny fiandohan'ny taonjato fa roapolo. I Gasy Rug izany dia nanome aina vaovao ny teknika izay mitady ho lany tamingana Malagasy izay tsy misy ankoatran'ny eto Madagasikara. Ny maha tokana an'ireo tapis Gasy Rug dia vokatry ny fiarahan'izy ireo miasa miaraka amin'ny Designer Pascale Vétois sy ireo "mains de fées" Malagasy izay manamboatra an'ireo zavakanto ao amin'i Gasy Rug. Amin'ny maha vita tanana an'ireo tapis ireo dia ny vokatra tsirairay dia tokana, asiana laharana ary aterina miaraka amin'ny "certificat d'authenticité". Miaraka amin'izany dingana artistika izany, i Gasy Rug dia manao asa sosialy miaraka amin'ny famoron'asa. Ireo vehivavy miasa ao amin'ny Gasy Rug dia mianatra an'io teknika nolovaina avy any amin'ny razana io sy miaro ny an'io fahaiza manao izay an'i Malagasy io. Cet article a été tiré de Gasy Rug
Mode - Jejoo
Na ho an’ny andro fety na amin’ny andavanandro dia isan’ny akanjo tena manaja ny akanjo lava tohitena hatreny an-kitrokely. Tena mety ho an’izao andro mafana izao ihany koa izy ireny satria maivamaivana ny lambany ka mampahazo aina tsara. Tsy mifidy sokajy taona ihany koa ny fanaovana azy ary tsy mety lefy laza mihitsy izy ity. Toy izao indray ireo fiakanjon’ny mpamaky ny gazety Jejoo miaraka amin’ny Robe maxi, voaangonay. Meva Yvianne Rianala Raz. Akanjo « maxi » maivamaivana, misoratsoratra, mety tsara ho an’ny andro mafana. Azo hanaovana mandeha miasa na mivoaka miantsena. Kapa fisaka no ampiharahina aminy. Manou Herissye. Be mpitia ihany koa ny zipo lava, akanjo ambony miloko marevaka no atao amboniny mba hanamarika ny andro mafana ary kapa fisaka hatrany no ampiarahina aminy. Aina Ramarou. Akanjo “maxi” maivamaivana, mety tsara amin’ny andro mafana. Mifanaraka amin’izay ihany koa ny lokony. Ampiarahina amin’ny kapa kely sy solomaso fiarovana amin’ny masoandro. L'article Robe Maxi, mety ho an’ny fotoana rehetra … a été récupéré chez Jejoo
Ireo fianjaika azo alain-tahaka
Efa karazana adidin’ny vehivavy mihitsy ny manao izay hahamety sy hahamendrika paozy isan’andro. Manahirana ihany anefa indraindray ny misafidy ny akanjo hanaovana. Mba tsy handaniana fotoana ela amin’izany ary dia ireto misy soso-kevitra fiakanjo mandritra ny herinandro. Hanombohana ny herinandro dia tsara raha manao paozy mihaja hatrany. Azo safidiana amin’izany ny akanjo tohitena. Mety tsara ho an’ny andro mafana ihany koa itony karazan’akanjo itony noho ny lambany maivamaivana. Ampiarahina amin’ny kapa avo vodin-tongotra izany rehetra izany. Azo entina mamonjy lanona ihany koa ity paozy ity. Tena lamaody ny pataloha malalaka toy ny amin’ny sary. Lobaka manara-batana no atao amboniny ary ampiarahina amin’ny kiraro avo vodin-tongotra. Raha tsy mahazaka izany anefa dia azo anaovana miaraka amin’ny kapa iva ihany koa ity fianjaika ity. Akanjo tohitena, mifanaraka tanteraka amin’ny vanin’andro mafana. Azo ampiarahina amin’ny kapa avo ditongotra izany ho an’ireo izay mahazaka. Mivoaka tsara ihany koa anefa raha anaovana amin’ny kapa iva. Tsy afa-miala amintsika vehivavy mihitsy ny pataloha “jeans”. Azo amoahana paozy isan-karazany izany toy ity amin’ny sary ity. Akanjo ambony mihaja, miendrika lobaka no atao amboniny ary kapa avo vodin-togotra no ampiarahina aminy. Azo anaovana miaraka amin’ny tenisy ihany koa anefa. Mety tsara ho an’ny faran’ny herinandro ity paozy iray ity. Ny akanjo tohitena fohy dia maivamaivana tsara, mety amin’ny andro mafana. Tsy mety lefy laza rahateo koa moa ny misoratsoratra toy ny amin’ny sary. Ny kapa iva no tena mety amin’ity karazana akanjo ity. Ho an’ireo izay tia manao fanatajahantena dia mety tsara ity paozy iray ity. Pataloha manara-batana (leggings) ampiarahina amin’ny akanjo ambony manara-batana ihany koa no anaovana, mba hampahazo aina tsara eo am-panaovana ny fanatajahantena. Tenisy no ampiarahina amin’izany paozy izany ary ampiana “survêtement” mifanaraka aminy, mialoha sy aorian’ny fanatajahantena. Meva Lahatsoratra nalaina avy amin'i :